सरकारले युवाको उमेर समूह पाँच वर्ष घटाउने, अब कति राख्ने त ? - radionrn.com
सरकारले युवाको उमेर समूह पाँच वर्ष घटाउने, अब कति राख्ने त ?
काठमाडौँ । सरकारले युवाको उमेर समूह पाँच वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२’ को पहिलो संशोधनमा युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।